Voampanga noho ny fanohintohinana ny fiarovam-pirenena tamin’ny fisoloantena ny hetsi-panoherana manohitra ny hijab i Nasrin Sotoudeh, mpisolovava Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2018 5:51 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, русский, ਪੰਜਾਬੀ, English
Nasrin Sotoudeh, mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona fanta-daza, ​​nogadraina noho ny fiarovana ny mpanao fihetsiketsehana manohitra ny hijab tao Iran.
Dikan-dahatsoratra nasiana fanitsiana tamin'ny lahatsoratra iray nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny Centre for Human Rights in Iran ity manaraka ity.
Nomelohin'ny manampahefana tamin'ny heloka bevava miisa roa noho ny fanohintohinana ny fiarovam-pirenena i Nasrin Sotoudeh, mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona, rehefa nisolontena ireo vehivavy migadra any Iran izay nanohitra am-pilaminana ny lalànan'ny Repoblika Islamika momba ny fisalorana hijab .
Nosamborina tamin'ny 13 Jona tao an-tranony i Sotoudeh ary nolazaina tsy nisy fanazavana izy fa ho entina any amin'ny fonjan'i Evin any Teheran mba homelohina dimy taona an-tranomaizina izay tsy fantany akory, ary voampanga tsy niatrika ny fitsarana azy.
“Nandritra ny fakàna am-bavany, nolazaina izy fa noho ny ‘fampielezan-kevitra manohitra ny fanjakana’ sy ny ‘fivoriana ary ny fikasana hanongam-panjakana’ no hiampangana azy satria niray tsikombakomba niaraka tamin-dRamatoa Shaparak [Shajarizadeh] izy tao amin'ny fitsarana ao Kashan,” araka ny nolazain'ny vadin'i Sotoudeh, Reza Khandan, tamin'ny Foibe ho an'ny Zon'olombelona ao Iran (CHRI).
“Tena mampihomehy no hilazana fa nihaona sy niray tsikombakomba tamin'ny olona arovany ny mpisolovava iray,” hoy izy nanohy. “Anisan'ny asan'ny mpisolovava ny fihaonana amin'ny olona arovany . Saingy ny tena mahaliana indrindra dia nosamborina tany Kashan (225 kilaometatra any atsimon'i Tehran) i Shaparak ary tsy afaka nandeha nankany i Nasrin ka tsy nisy noho izany ny fihaonana natao tao amin'ny fitsaran'i Kashan.”
Nanomboka hatramin'ny volana Desambra 2017, nosamborina noho ny fanoherana am-pilaminana ny lalànan'ny Repoblika Islamika amin'ny fisalorana hijab ireo vehivavy Iraniana anisan'izany i Shajarizadeh rehefa manala izany sy manofahofa ny saron-dohany eny amin'ny làlana be olona. Fantatra amin'ny media sosialy amin'ny anarana hoe “Vehivavin'ny Lalan'ny Revolisiona,” farafahakeliny telo amin'ireo vehivavy no voampanga amin'ny fomba ofisialy noho ny tsy fankatoavany ny lalàna sivily.
Araka ny andininy faha-638 amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Islamika ao Iran, “Ny vehivavy, izay miseho eny amin'ny toerana ho an'ny daholobe sy eny an-dàlambe ka tsy mitafy hijab Islamika, dia homelohina 10 andro ka hatramin'ny roa volana an-tranomaizina na hampandoavina lamady 500 ka hatramin'ny 50.000 rials.”
Ary miampy hoe : “Na iza na iza eny amin'ny toerana ho an'ny daholobe sy eny an-dalambe ka manao harām [fahotana] am-pahibemaso dia hosaziana an-tranomaizina roa volana na vely karavasy hatramin'ny 74 izy ankoatra ny sazy tandrify ilay fandikan-dalana ; ary raha toa izy ireo ka manao fihetsika tsy misy sazy kanefa mandika ny fahamendrehan'ny daholobe, dia ho saziana 10 andro ka hatramin'ny roa volana an-tranomaizina izy ireo na karavasiana hatramin'ny in-74 . “
Nanohy ny teniny ny vadin'i Sotoudeh: “Raha manontany ahy ianareo hoe inona no tena eritreritr'ireo manampahefana dia hamaly aho hoe tian'izy ireo hijanona ao an-tranony fotsiny i Nasrin ary tsy handray anjara amin'ireo hetsika toy ny ‘Vehivavin'ny Lalan'ny Revolisiona’ ary mitsahatra tsy hiaro intsony ireo mpikatroka sivily sy politika ary tsy hanatontosa antsafa amin'ny fampahalalam-baovao. “
“Heveriko fa very hevitra izy ireo”, hoy izy nanampy. “Nosamborin'izy ireo izy ary mikononkonona zavatra hanenjehina azy izy ireo ankehitriny.”
Nilaza i Khandan fa mikasa ny hanatevin-daharana ireo mpanao hetsi-panoherana manohitra ny hijab ao Iran mba hanoherana ny fisamborana azy i Sotoudeh.
“Niteny tamiko i Nasrin nandritra ny famangiana androany [17 Jona] fa miasa mafy izy tamin'ny raharahan'ireo olona arovany telo- ireo Vehivavin'ny Lalan'ny Revolisiona- ary heveriny fa tsy araka ny maha-olombelona ny tsy maintsy hisalorana ny hijab ary manohitra ny zon'olombelona ary hanala ny saron-dohany ao am-ponja ihany koa izy raha mitohy ny fitazonana azy,” hoy izy.
Nilaza tamin'ny CHRI ihany koa i Khandan fa nandà ny haka mpisolovava i Sotoudeh ho fanoherana ny fampidiran'ny fitsarana ny lisitr'ireo mpisolovava miisa 20 avy amin'ny fanjakana vao haingana izay hiaro manokana ireo voafonja voatazona tamin'ny fiampangana ara-politika ao Iran.
Nivory teo ivelan'ny vavahadin'ny Fonjan'i Evin mba hanoherana ny fisamborana azy tamin'ny 17 Jona i Khandan sy ireo mpisolovava mpiaro roa Arash Keykhosravi sy Payam Derafshan ary ireo mpikatroka mpiaro zon'olombelona maro.
Keykhosravi sy Derafshan no nisolo tena ny fianakavian'i Kavous Seyed-Emami, mpampianatra ambony sady mpiaro ny tontolo iainana Iraniana-Kanadiana izay maty noho ny toe-javatra mampiahiahy tao amin'ny Fonjan'i Evin tamin'ny volana Febroary 2018.
Nikasi-tanana ireo mpanao fihetsiketsehana ireo mpiambina ary nisambotra ny sivy tamin'izy ireo nandritra ny ora maromaro, hoy i Khandan. “Nahitana ratra maro” i Keykhosravi sy Derafshan ary ireo mpanao fihetsiketsehana roa hafa ihany koa, hoy izy nanampy.
“Nivory teo anoloan'i Evin izahay tamin'ny 10 ora teo ho eo androany maraina [17 Jona] saingy nandroaka anay ny mpiambina ary eo ambanin'ny tetezana akaikin'i Evin ankehitriny no hanaovana ny fivoriana,” hoy i Khandan. “Raha vantany vao nanomboka nihira ny teny filamatra ireo namanay sy nanangana ny sora-baventy dia namely totohondry sy daka anay ary nisambotra ny sivy taminay ny mpiambina.”
“Tao anatin'ny fiaran'ny polisy izahay nandritra ny adiny iray avy eo nafindra tany amin'ny fitsarana ary farany navotsotra afaka ora vitsivitsy”, hoy izy nanampy. “Avy hatrany aho dia nankany amin'ny Fonjan'i Evin mba hahita an'i Nasrin satria androany no misy ora maromaro azo itsidihana ireo voafonja .”
Taorian'ny namotsorana azy dia nilaza tamin'ny tranokalam-baovao reformista Etemad Online i Derafshan fa niala tsiny ny manampahefana iray tao Evin noho ny herisetra nitranga .
“Taorian'ny fifandonana tsy araka ny tokony ho izy izay nataon'ny mpitandro ny filaminana dia niala tsiny noho ny fahadisoany ny solontena avy ao amin'ny Fitsarana ao Evin ary nilaza fa hijery akaiky ny zava-nitranga izy ireo noho ny fitandroana ny filaminana sy ny fitantanana ny krizy araka ny tokony ho izy”, hoy i Derafshan.